Ngabe seyidayisiwe iTTM? Amahlebezi asho njalo - Impempe
Ngabe seyidayisiwe iTTM? Amahlebezi asho njalo
Sekuqubuke amahlebezi okuthi iqembu elidonsa kanzima enkundleni nangokwezimali kwiDStv Premiership, iTshakhuma Tsha Madzivhandila selidayisiwe. Ngokuthola kweMpempe, leli qembu likaMasala Mulaudzi lidayiselwe inkinsela thizeni yaseNorth West.
Uma ziyiqiniso lezi zindaba, zizokwehla kahle kubadlali obekunamahlebezi okuthi babuye nengakhokhelwa imiholo ephelele.
Kuthiwa lo somabhizinisi elingakadalulwa igama lakhe ukhokhe imali elinganiselwa kuR49-million ukuze athathe leli qembu ezandleni zikaMulaudzi obedonsa kanzima ukugcina izindleko zalo.
Akukacaci okwamanje ukuthi kuzomnyezelwa mini ngokusemthethweni ukudayiswa kweTTM nokuthi ngabe iPremier Soccer League (PSL) seyiyazi yini ngalezi zinguquko.
Kuthiwa izindaba zokudayiswa kweqembu zethulelwe abadlali ngemuva komdlalo wabo neSuperSport United ngeSonto ntambama kanti bazamukele ngenhlokomo njengoba zibanika ithemba lokuthi sebezoyithola iphelele imiholo yabo.
Khonamanjalo, yize iTTM yehluliwe yiSuperSport ngo 2-0, umqeqeshi wayo, uJoel Masutha (osesithombeni) usale echazekile futhi usola inhlanhla ngokungazuzi lutho kulo mdlalo.
UMasutha ukholwa wukuthi badlale kahle kakhulu futhi bekubafanele ukuphuma noma yinephuzu kulo mdlalo obuseThohoyandou Stadium, eVenda ngeSonto.
“Sidlale kahle kakhulu, ngicabanga ukuthi bekungokokuqala senza kahle kanje kusukela kuqale u-2021. Besazi ukuthi bamandla kuphi, sakuvimba lokho ukuthi bangakusebenzisi,” kusho uMasutha.
“Futhi nathi sibe namathuba amathathu amahle. Kodwa njengosekujwayelike sangawasebenzisa. Elilodwa lizishayise epalini. Yingakho lona kungumphumela okunzima ukuwamukela, ikakhulukazi uma ubheka indlela esingenelwe ngayo amagoli.
“Ngicabanga ukuthi elokuqala bekungamele balinikwe ngoba besilinyazelwe umdlali wethu kodwa unompempe wakuziba lokho, bathatha ibhola bayoshaya igoli.
“Sithe sisatatazeliswa yilokho, baphinda elinye okuyinto ebe seyisiphazamisa kakhulu. Babe sebefaka isitobha sesihlanu ukuqinisekisa ukuthi asidluli emuva,” kuchaza uMasutha.
Uthe uma ebheka umfutho namangwevu abawafakile kulo mdlalo, ubona sengathi bebefanele ukuzuza okuthile, kodwa ngebhadi labo kwangenzeka.
Previous Previous post: ‘Ngiyaziqhenya ngabafana bami,’ kusho umqeqeshi weThe Citizens
Next Next post: OweChiefs akakhohliwe ubuhlungu ababuzwiswa yiBaroka